အာကာသသို့ ကိုယ်ပိုင်စွမ်းအားဖြင့် သွားမည့်သူ - JAPO Japanese News
ကြာ 19 Dec 2019, 11:11 မနက်
ဒါပေမယ့် လက်တွေ့ မှာတော့ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ယာဉ်ကမရှိတဲ့အတွက်၊ ရွေးချယ်ခံရတဲ့ လူနည်းစုသာလျှင် အာကာသစခန်းသို့ သွားရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပုဂ္ဂလိကပိုင် အာကာသခရီးစဉ်ကို အစပြုဖို့ ကလည်း အရင်ကပြောခဲ့တဲ့ အတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
“အရှုံးပေးလိုက်တဲ့အခါ အရာအားလုံးက ရပ်တန့်သွားလိမ့်မယ်။
ဆက်ပြီးကြိုးစားရင်တော့ လမ်းက သူ့ အလိုလို ပွင့်လာလိမ့်မယ်။”
ဒီဆောင်ပုဒ်ကိုယုံကြည်ပြီး လူလိုက်ပါစီးနှင်းနိုင်တဲ့ အာကာသယာဉ်ရဲ့ စတင်လာမှုအပေါ် မိမိဘ၀နဲ့ လောင်းကြေးထပ်ခဲ့သူတစ်ဉီးရှိပါတယ်။
အိုဂ၀ါ ရှူးဂျိ Ogawa Shuuji ဆိုသူပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးဘ၀ထဲက လေယာဉ်မှူး ဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့ အိုဂ၀ါ ဟာအကြိမ်ပေါင်းများစွာ စိန်ခေါ်မှုတွေကိုလုပ်ခဲ့ပေမယ့် သူ့ ရဲ့ အိပ်မက်ကတော့ အမှန်တကယ် ဖြစ်မလာဘဲ ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။
ဒါကိုအရှုံးမပေးဘဲ ထပ်ပြီးမျှော်မှန်းခဲ့တာကတော့ အာကာသယာဉ်မှူးပဲဖြစ်ပါတယ်။
အာကာသယာဉ်မှူးဆိုတာက ရွေးချယ်ထားတဲ့ လူနည်းစုသာလျှင် ကျွမ်းကျင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ပုဂ္ဂလိကပိုင် တိုက်လေယာဉ်ရဲ့ စတင်မှုစီမံကိန်းမှာ အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ အာကာသယာဉ်မှူးဘက်ကို လျှောက်ထားပေမယ့် အဲ့ဒီပတ်၀န်ကျင်က ပညာအရည်အချင်း ကောင်းမွန်သူများသာြဖစ်ပါတယ်။
“သူတို့တွေက ငါ့ထက်သေချာပေါက် အာကာသယာဉ်မှူးဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်”လို့ နားလည်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာသူက သူ့ ရဲ့ အတွေးအခေါ်ကိုအနည်းငယ် ပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။
အာကာသကိုသွားချင်ရင်တော့ ရွေးချယ်ခံရဖို့ စောင့်ဆိုင်းရန်မလိုတော့ဘဲ ကိုယ်ပိုင်အစွမ်းအစနဲ့ သွားနိုင်ရမယ့်အချိန်ပဲ လို့ စဉ်းစားပြီး၊ ၂၀၀၇ ခုနစ်မှာ ကိုယ်ပိုင်အရင်းအနှီးငွေ 1,000万円 နဲ့ Aerospace ဆိုတဲ့ ကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီကုမ္ပဏီကတီထွင်နေတဲ့အရာကတော့ ဒုံးပျံနဲ့အနည်းငယ်ကွာခြားပြီး လေယာဥ်လိုပုံစံမျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလေယာဥ်ဟာ အမြင့်ပေပေါင်း ၁၀၀ ကီလိုမီတာအကွာအ၀ေးအထိ လူမပါဘဲသွားနိုင်တဲ့ စမ်းသပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ၂၀၂၀ မှာတော့မျှော်မှန်းထားတဲ့ အမြင့်ပေပေါင်း ၁၀၀ ကီလိုမီတာအကွာအ၀ေး ကိုကျော်လွန်နိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းလျှက်ရှိပါတယ်။
ဒီလိုစမ်းသပ်ခံ သေးငယ်တဲ့အင်ဂျင်ကနေတစ်ဆင့် လေယာဥ်ကိုယ်ထည်ကိုပါတပ်ဆင်နိုင်တဲ့ အင်ဂျင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန် ကြိုးပမ်းမှုများကိုလည်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။
ရေဒီယိုထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကို ပြန်လည်ပြုပြင်ထားတဲ့ သေးငယ်ပြီးရိုးရှင်းတဲ့ လေယာဥ်မှတစ်ဆင့်၊ ပုံပါအတိုင်း အလျား ၁၀ မီတာ၊ အလေးချိန် ၃ တန်အရွယ်အစားရှိ လေယာဥ်ငယ်တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
သီအိုရီအရ အောင်မြင်တယ်လို့တော့ မဆိုနိုင်သေးပါဘူး။
ဒါပေမယ့် အိုဂ၀ါတစ်ယောက်ကတော့ “ Physical lawsအရ ပြောင်းလဲမှုတွေသိပ်မရှိပေမယ့် သူရဲ့ idea နဲ့ သူရဲ့ တီထွင်ကြံဆမှုကတော့ အောင်မြင်တယ်” လို့ ယုံကြည်ထားသူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုလက်ရှိ တီထွင်နေတဲ့လေယာဥ်ရဲ့ အရေးကြီးဆုံးအပိုင်းကတော့ အင်ဂျင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပုံမှန်လေယာဥ်တွေက ဂျက်အင်ဂျင်တွေကို တပ်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကလေထုထဲမှာသုံးတဲ့ အင်ဂျင်တွေဖြစ်တာကြောင့် အာကာသထဲမှာတော့ အသုံးမ၀င်ပါဘူး။
ဒါကြောင့် ပုံမှန်ဒုံးပျံတွေမှာသုံးတဲ့ ဒုံးပျံသုံးအင်ဂျင်ကို အသုံးပြုရပါတယ်။
လေထုမရှိတဲ့အာကာသထဲမှာ လောင်ကျွမ်းအောင်လုပ်ရတဲ့အတွက် လောင်စာပမာဏကလည်း သိသိသာသာကုန်ကျပါတယ်။
လောင်စာပမာဏအများကြီး ကုန်ကျဖို့ကလည်းလိုအပ်တဲ့အတွက် ဒုံးပျံဟာအလှမ်း၀ေးတဲ့အရာတစ်ခု ဖြစ်လာပါတယ်။
ယခုလက်ရှိသူတီထွင်နေတဲ့ အင်ဂျင်မျိုးကတော့ ဂျက်လေယာဥ်နဲ့ ဒုံးပျံတို့ လို လောင်ကျွမ်းရတဲ့နည်းကို ပြောင်းလဲစေနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လေထုထဲမှာတော့ ဂျက်ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီး ဒါထက်အမြင့် အာကာသထဲရောက်သွားရင်တော့ ဒုံးပျံလိုပုံစံမျိုး ဖြစ်သွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းဖြင့် လောင်စာကိုချွေတာနိုင်ပြီး၊ သိပ်သည်းကျစ်လစ်တဲ့ လေယာဥ်ပုံစံအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
လေယာဥ်ရဲ့ တည်ဆောက်ပုံကလည်း ထူးခြားပါတယ်။ အာကာသကို ရှည်လျားတဲ့ဒုံးပျံလိုဟာမျိုးကပဲ သွားနိုင်မယ်လို့ပဲ အားလုံးကသိကြတယ်မဟုတ်လား? ဒါဆို ဒီလိုလေယာဥ်ပုံစံလေးမှာကော အင်ဂျင်ရှိပါ့မလား….?
ငြင်သာစွာအမြင့်သို့တက်သွားပြီး လိုက်ပါလာတဲ့လူတွေရဲ့ အလေးချိန်ကိုလျော့ချပေးပါတယ်။ ထို့နောက် ပျံတက်သွားတဲ့လေယာဥ်က ပုံစံမပျက်ပြန်ရောက်လာတဲ့အတွက် နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်အသုံးပြုဖို့လည်း အဆင်ပြေတဲ့ လေယာဥ်ပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်။
လေ့ကျင့်မှုတွေမလိုဘဲ မည်သူမဆိုအာကာသထဲသို့ သွားနိုင်တဲ့အပြင်၊ ဈေးနှုန်းလည်းသက်သာတဲ့ဘက်ကနေ ကြည့်ရင် ပိုပြီးကျိုးကြောင်းဆီလျော်တဲ့ အာကာသခရီးစဥ်ဟာ ဒီလေယာဥ်ရဲ့ အားသာချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုသူ့ ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်မှာ ကုမ္ပဏီတွေကလည်းပဲ သတိပြုမိလာပါတယ်။
“နောင်တစ်ချိန်မှာ လေယာဥ်နဲ့အာကာသထဲကို ခရီးထွက်မယ်” လို့ပြောလာတာကတော့ ဂျပန်ရဲ့ အဓိကလေကြောင်းလိုင်းကုမ္ပဏီ ANA ကပဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး အဓိကခရီးသွားကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ HIS ဟာ အခြားကုမ္ပဏီတွေ မတတ်နိုင်တဲ့ ဒီခရီးစဥ်ကိုလည်းပဲ အဆိုပြုခဲ့ပါသေးတယ်။
အိုဂ၀ါ ကတော့ အရင်းအနှီးငွေကို အစောကတည်းက စုဆောင်းထားခဲ့တဲ့အတွက်၊ သူ့ရဲ့ ပရောဂျက်ကလည်း တွင်ကျယ်လာခဲ့ပါတယ်။
ယခုကတော့ အရင်ဆုံး အမြင့်ပေ ၁၀ ကီလိုမီတာမှာ လေယာဥ်ရဲ့အနေအထားနဲ့ အင်ဂျင်ရဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကို စစ်ဆေးသွားပါမယ်။ ဒါပြီးရင်တော့ ပုံပါလေယာဥ်အတိုင်း အမြင့်ပေပေါင်း ၁၀၀ ကီလိုမီတာအထိ ပျံသန်းစေဖို့ ၂၀၂၀ မှာ မျှော်မှန်းထားပါတယ်။
လက်ရှိအနေအထားအထိ တတ်နိုင်မယ်သာဆိုရင် နောက်ပိုင်းမှာ လူပါစီးနင်းနိုင်ပြီး၊ ၎င်းတို့ရဲ့လုံခြုံမှုလည်း အတည်ဖြစ်သွားရင်တော့၊ လုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့ အစပြုလာတော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လာမယ့် ၂၀၂၄ ခုနစ်မှာ ဒီလုပ်ငန်းကို အစပြုချင်တယ်လို့လည်း ဆိုထားပါသေးတယ်။
1000万円ဒီငွေပမာဏက နည်းတော့မနည်းပေမယ့်၊ အာကာသသို့ တိုးတက်မှုလုပ်ငန်း အနေနဲ့ကတော့ တော်တော်လေးကို နည်းတဲ့ပမာဏပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုအရှုံးမပေးတဲ့ သူရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုမှာတော့ ပတ်၀န်းကျင်ရဲ့ အားပေးမှုနဲ့အတူ ထောက်ပံ့မှုတွေလည်း ရရှိခဲ့ပါတယ်။
အိုဂ၀ါရဲ့ အိပ်မက်တွေက ဒီနေရာမှာအဆုံးမသတ်သွားပါဘူး။ အရင်ဆုံး လေယာဥ်အရွယ်အစားကို ပြောင်းလဲပြီး၊ နောက်ပိုင်းမှာ အာကာသထဲသို့ လိုအပ်မယ့်ပစ္စည်းတွေကိုပို့ပေးမယ့် အခန်းကဏ္ဍကိုပါ ဆောင်ရွက်ချင်တယ်လို့ စဥ်းစားနေပါတယ်။
အာကာသစခန်း၊ ဒါ့အပြင် အာကာသဟိုတယ်ကိုလည်း အကောင်အထည်ဖော်မယ်ဆိုရင်တော့ လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေရဲ့ သယ်ယူပို့ဆောင်ခဟာ အတော်လေးကို ကုန်ကျပါမယ်။
ပြောင်းပြန်အနေနဲ့ပြောရရင် ဒီကုန်ကျစာရိတ်သာရှိရင် ယခုလက်ရှိနည်းပညာနဲ့ တည်ဆောက်ဖို့က မခက်ခဲတော့ပါဘူး။
ပုံမှန်ဒုံးပျံထက် ကုန်ကျစာရိတ်ကိုလျော့ချနိုင်တဲ့ သူ့ရဲ့ လေယာဥ်မှာတော့ လူအများရဲ့အာရုံစိုက်ခြင်းခံရလျက် ရှိပါတယ်။
တစ်ဖန် ဒီကမ္ဘာမြေမှပြောင်းရွေ့ဖို့ ဆန္ဒပြမှုလည်းလုပ်ချင်ပါတယ်လို့ စဥ်စားနေပါတယ်။
ပုံမှန်လေယာဥ်ရဲ့ နှုန်းကနေးတဲ့အတွက် ရွေ့ ပြောင်းဖို့အချိန်ကလည်းကြာပါမယ်။ ”ဒါဆို တစ်ခါတည်း အာကာသကိုထွက်နိုင်တဲ့ Mach5(တစ်နာရီ 6174 ကီလိုမီတာသွားနိုင်သောလေယာဥ်) ရဲ့ နှုန်းနဲ့သာဆိုသွားနိုင်မယ်” လို့စဥ်းစားခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုနည်းနဲ့ ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ အနောက်ဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်လည်း ထွက်ခွာချိန်ကနေ ဆိုက်ရောက်တဲ့အထိ အချိန်အနည်းငယ်နဲ့ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ ဒါကိုလည်း စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။
အရင်ပြောခဲ့သလိုပါပဲ၊ အမြင့်ပေ ၁၀၀ ကီလိုမီတာမှာ မရပ်တန့်သွားဘဲ၊ ပိုပြီး၀ေတဲ့နေရာထိသွားဖို့ ပြင်ဆင်နေပါတယ်။
“လနဲ့ဂြိုလ်တွေအထိတောင် သွားရောက်နိုင်ဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ဆန္ဒရှိတယ်။” လို့ အိုဂ၀ါက သူ့ရဲ့ အိပ်မက်ကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“ယခုရောက်ရှိနေတဲ့နေရာက ကျရှုံးမှုတွေကို အကြိမ်ကြိမ်ထပ်လုပ်မိရင်းနဲ့ ပြဿနာတွေကို ကြံ့ကြာစေတဲ့နေရာပဲ ဖြစ်တယ်။ နောက်ဆုံးမှာ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ အကြမ်းတမ်းဆုံးပတ်၀န်းကျင်မှာ ရှိနေလိမ့်မယ်။”
လို့ မချိပြုံးလေးနဲ့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒါကိုအကြိမ်ဖန်များစွာဆောင်ရွက်ပြီး၊ ကလေးဘ၀ရဲ့အိပ်မက်ဖြစ်တဲ့ လေယာဥ်မှူးတစ်ယောက်၊ အရွယ်တစ်ခုရောက်လာချိန်မျာလည်း အာကာသယာဥ်မှူးတစ်ယောက်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ဒီအိပ်မက်နှစ်ခုကို ပြောင်းစပ်ပြီး၊ ကိုယ်တိုင်အကောင်အထည်ဖော်မှာကတော့ အိုဂ၀ါကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှုကတော့ မောပန်းနွမ်းလျခြင်းမရှိဘဲ အရှိန်အဟုန်ကောင်းကောင်းနဲ့ တောက်လောင်လျှက်ရှိပါတယ်………။
Shizuoka စီရင်စု Atami မြို့ရဲ့ မြေပြိုမှု နောက်ဆက်တွဲသတင်း (သေဆုံးသူ ၃ ဦး၊ တည်နေရာမသိပျောက်ဆုံးနေသူ ၈၀ ဦး၊ အတည်ပြုရန်အလျှင်လိုနေ)